Kaliya Ilaah i xukun karaa? — TRIP LEE
Ku bood tusmada hoose
Kaliya Ilaah i xukun karaa?
Waxaan jecel hadlayaan doonista Ilaah ee nolosheena, xitaa marka qof ku raacsanayn ila ku saabsan. Wada hadaladii ka heli kartaa dhabta ah waqti dhab ah oo degdeg ah inkasta oo-gaar ahaan marka aan la hadlayo ku saabsan arrimaha lagu muransan yahay. Waa marnaba xiiso inaad u sheegto qof in aad u malaynayso in ay khalad tahay. Sidaas daraaddeed waxaan isku dayaan in ay taxaddar leh erayadayda, oo si fudud u tilmaamo wixii uu Ilaah ku yidhi, halkii fikradaha aniga ii gaar ah. Like clockwork, in kastoo, barta qaar ka mid ah inta lagu guda jiro wadahadalka, waxay jiid doonaa kaarka buunka: "Laakiin ma Kitaabka Quduuska ah ayaa sidoo kale aan ku odhan xukumi? Waxaad ku haboon u boodboodeen badan aayadda in, huh?"Waa ma baajiyo.
In Matthew 7 Ciise wuxuu ku yidhi, "Cidna ha xukumina, ama aad la xukumi doonaa. "Xitaa kuwa naga mid ah oo badan weligiin akhriyin Kitaabka Quduuska ah soo qaadan karaa oo qayb ka ah eraygiisa khudbada erayga. Tani waxay noqon kartaa ugu aayadda Bible ugu fiican u yaqaan in maanta. Oo waxaa sidoo kale laga yaabaa in laga fahmay ugu
Qalad uu aayaddan waxaa loola jeedaa waxaan fahmi sida aan u malaynay in midkiinba midka kale jeclaado. Haddaba waxaa muhiim ah in aan ku weydiino su'aasha: Muxuu Ciise macnaheedu markii uu inoo sheegayaa in aan la xukumi?
Maxaa uu miyuusan Dhigan
isbuucii hore, aniga iyo xaaskeyga waan qayb-galay siminaarka guur at our kaniisadda. Sida aan ku socday iyada oo nook kasta oo cranny of our guurka, waxaan lahaa si wanaagsan u wada hadlaan, xumaana, oo fool xun ah. Waxaan helnay fursado badan oo ay ku dhiiri kasta oo kale oo, laakiin waxaan sidoo kale fursadaha in u tilmaan ceebaha. Inta lagu guda jiro wada hadal noo, ee naagtayda i caawiyey si aad u aragto meelaha aan ka dhicin gaaban, halkaas oo aan aan ahay sida jacaylka sidii aan ahaan waa. Oo iyana waxay caasiyay amarkii Ciise ma igu xukuntid? Waxaan sidaas ma rumaysni.
Ciise ma uu noqon karaa in ay tahay qalad ah in la sameeyo wax kasta oo xukummadaada moral. Just a aayado yar ka dib, Ciise dhagaystayaasha uu sheegayaa in la sameeyo xukummadayda ku saabsan cidda ay runta la wadaagto. Oo aayadda 15 ee cutubka isla, Ciise ayaa u waanin inuu xukumo kuwa Sheegan inay nebiyo, si aad u aragto haddii ay si dhab ah hadlaan xagga Ilaah ka yimid ama haddii ay tahay yeey qaba dharka idaad. Aan xuso meelihii kale ee badan ee Kitaabka in nagu amri in la sameeyo noocyo kala duwan xukummadaada moral. Ciise macnaheedu ma aha in la yidhaahdo xukunka oo dhan waa khalad. Oo haddii aan nahay daacad nafteena, waxaan ula jeednaa ma in midkood.
Dad badan ayaa ku adkeyso in ay tahay in aad marnaba xukumi qof, laakiin ma run ahaantii ay aaminsan yihiin in. Iyagu ma u maleynayaa in qalad in ay soo wac gaysteen ku ganacsada daroogada iibinta daroogada hore ee gurigooda. Oo waxay ma u maleynayaa in qalad in ay dami TV marka la wacdiyin in hunguri bilaabo dawarsanayay ay lacag. Markaas waxaa jira adkaantii. Marka aad wacdo qof maqnaan xukumaya, aad si dhab ah samaynta xukun moral oo ku saabsan qof in. In kasta oo kiisaskan, xukummo lagu sameeyey oo ku saabsan falalka dadka kale.
Weli, markii xukunka ku dhufan doonto meel u dhow guriga, waa si toos ah khalad. Yaa aan si ay u sameeyaan xukummadayda ku saabsan dadka kale? Aan ka fikirto waxa Ciise macnaheedu markii uu inoo sheegayaa in aan garsoore.
Maxaa uu macnaheedu
Waxaan u isticmaali xaakinka erayga in badan oo siyaabo kala duwan. laga yaabaa Waxaan la hadleynaa xukumaya tayo show ama xukumaya kiiska maxkamadda. Waxa uu noqon karaa waxyaabo badan oo kala duwan. Sidoo kale, erayga Giriigga ah Ciise wuxuu isticmaalaa for "xaakin" Mar walba macnaheedu ma aha wax la mid ah. Sidaas daraaddeed waxaan u leeyihiin in ay eegaan inta kale ee tuducdan iyo inta kale ee Kitaabka Quduuska ah haddii aan doonayo in aan garto bal waxa uu macnaheedu yahay.
Sida aad sii reading marinka, waxa uu noqonayaa mid iska cad in Ciise weerarka nooc gaar ah oo xukun. Waxa uu isticmaalaa image ah ka fooliyey nin arko, dogobka ah sida balka in qof ka duso, laakiin iska dhega xaqiiqada ah in uu leeyahay log a toosaa ee isaga u gaar ah. Taasi waa sida nin qaawan dhaleeceeyay godka ku jiinis aad. Ciise aan la xukumeen nooc kasta oo garsoorid; Waxa uu cambaareeyey is-kan xaqa ahu, xukummo labawejiilayaashu.
aayaddan 5 ayuu yidhi, "Labawejiile, hore u gasho our of ishaada. "Ka hor inta aan isku dayo inuu xukumo kuwa kale, waa in aan xukumi nafteena. Hypocrites dadka heerarka inay is illowsiin qaban. Oo intii dadka is-kan xaqa ahu waxay leeyihiin hadiyad gaar ah farta ku fiiqaya ayna duleella aad, ay tahay luxo iyaga u gaar ah. Ciise ayaa sheegay in dhibaato. Oo isna wuxuu inoo sheegayaa Ilaah na xukumi doonaa soo laabtay.
Waa doqonimo in Xumeeyaan xukumi dadka kale iyo in ay iyaga u taliya istaagaan sidii aad noloshaada u san yahay. Ilaah baa xaakin ah oo keliya gacmo nadiifsan. Inta kale oo naga mid ah waa dad wasakh, fiiqaya kasta oo kale in qubeyska.
Waxaad dareemi isagu marnaba sheegay, "Qaado log ka soo, oo ha ka welwelina indhaha dadka kale. "Waxa uu sheegay in si dhab ah, "First qaadan log ka soo ishaada, ka dibna waxa aad si cad u arki doonaa in ay qaataan, dogobka ishaada soo baxay ee walaalaha isha. "Waxa uu inoo sheegayaa in la baaro nafteena, ka dibna si ay u caawiyaan walaalkiis ka soo.
Waa unloving ii aragto wax waxyeello ah ee noloshaada, laakiin in iska dhega tirin sida ma ahan waxaa jira. Waa maxay sababta aan u doonaynin inuu qof aan jeclahay weli ku nool yihiin hab burbur? Haddii waan ku jeclahay, Runtii waxaan kuu sheegi doonaa oo ay waxyeello. Laakiin waa in la ku salaysan heerka Ilaah, aniga ii gaar ah oo aan. Oo waxaan u leeyihiin in ay u samayn ka Dhehana kuwa is-hoosaysiiya in ay aqoonsan tahay waxaan u baahanahay nimcada isku aad samayn.
Fadlan ha adeeca Matthew 7:1. Laakiin ha iloobin Galatiya 6:1: "Brothers, haddii uu qof la qabto dembi ah, waa in aad kuwa xagga ruuxa si tartiib ah isaga soo celin. "Waxaan u baahanahay kasta oo kale oo.
0 0	saamiyada
MrAveryBrown • November 12, 2013 at 12:46 pm • Reply
Ku dhiirigelinta. canaano. fekeray. Aynu hubi Quluubtooda, ku dadaalaan si ay u bartaan fikrad this, maalin iyo waxa ka codsan.
Steve • November 13, 2013 at 4:31 pm • Reply
ereyga Good, Trip. Aad wax ku ool ah, codsi waxtar leh, kuwa ka qabashada xaaladda noocan ah. Nimco iyo nabadu…
Esteban Ramirez • November 12, 2013 at 12:57 pm • Reply
Tani waa qeexidda ugu saxsan ee aayadda in. Waad ku mahadsan tahay walaalkaa waxaan la dhibtoonayay this. Thanks walaalkay sii samaynayaan wixii aad samayn!
Your Brother in Masiix!
Charles • November 12, 2013 at 1:07 pm • Reply
Sida aan wadaad tageen kaliya this ka badan toddobaad ka hor, waa cusub oo maskaxdayda. Pastor Brian yiri “Garsoore ma aha ereyga saxda ah haddii aad ka akhriyi Greek, oo wuuna akhriyey ee macnaha.” Waxa uu ku tageen in la yidhaahdo turjumaad ka wanaagsan waxa ay noqon lahaayeen “ma xukumi sida Judge a” ama u dhaqmaan sida xaakin (testement Old style). Samaynta xukun iyo xukunka ridayay a yihiin 2 waxyaabo kala duwan.
Mi mi Rivera • November 12, 2013 at 1:10 pm • Reply
Aint nothin Runta mooyaane :) Aamiin walaalkiis.
Jared • November 12, 2013 at 1:25 pm • Reply
Tani waa run ahaantii waxtar leh in aan nolosha hadda. Waxaan dhawaan la yeelanaya dood la ayeeyo oo aan Mu'min ah, oo waxaan isku dayayaa si ay u muujiyaan jacaylka iyada Ilaah. Waan ku qiran doonaa dembiga iyadii oo weydiiso iyada dambi dhaaf, oo waxay ka cafiyi doonaa, laakiin iyadu canaan doonaa oo ku saabsan sida xun baan ahay at waxyaabaha qaarkood. Waan ogahay in aan qalad ahay sababta oo ah xukun aan horey u dareemaan Ilaah ka yimid, laakiin waxa ay i dhibayso yara maxaa yeelay, iyadu ma aragto dembi iyada u gaar ah. Waxay kaliya hoos igu jejebiyaa. Waxaan ilka iyo iyada jecel. Waxaan fahamsanahay in aan qabto arrimaha qoyskeyga jecel, laakiin waxa ay i dhibayso gudaha yar markay aan qirayaa dembi iyada u gaar ah oo waa si degdeg ah u qirayaa anigaa. Tani waa qaar ka mid ah caawimaad kastoo. Thanks
Ezra_of_Israel • November 12, 2013 at 1:31 pm • Reply
Jidka aad u wanaagsan oo waa iyo falanqaynta Qorniinku gelinaya. Ilaah ha idiin barakeeyo. Waa maxay jacayl? Waxaan waqti dheer oo ku saabsan su'aasha in fudud ...... woah
PastorBenJohnson • November 12, 2013 at 1:34 pm • Reply
Xuquuqda on! Si tagaan oo ay la socdaan this, Paul ayaa sheegay in 1 Corinthians 5:12: “Waa maxay ganacsiga waa inaan xukumo kuwa dibadda ah? Ma aadan inuu xukumo kuwa gudaha.”
Waa shaqo sidii Mu'miniinta si uu u qabto walaalaha aan Masiixa xisaabtamo. Laakiin, waxaan u baahan nahay in la nafteena oo dhan imtixaantid! Trip blog Great Lee!
harryyeboah • November 12, 2013 at 1:47 pm • Reply
wow! wax badan ka bartay. Ilaah ha barakeeyo..
EboniRenee • November 12, 2013 at 1:49 pm • Reply
Beautifulluy & fikiraya saaray. Waxaan loo baahan yahay this.
Tony • November 12, 2013 at 2:00 pm • Reply
Trip Thanks, tani waa qayb muhiim ah oo Qorniinka inay si sax ah u fahmaan. Waad ku mahadsan tahay this post. Waxaad shubaa erayada waxa aan fileynay. Waxaan ahay wadaad dhalinyarada ah, oo tanuna waa wax hishiis la raba in ardayda aan ku saabsan hadli. Anna waxaan noqon doonaa hubi inaad isticmaasho this post iyo ballaariyo on dhibcood, kuwaas oo. Mar kale mahadsanid, waayo, in aad samaysaan oo aad samayn doono oo dhan. Waxaan ilaahay ka baryaynaa in ay sii wadi doonaan in ay adiga iyo qoyskaaga ku barakeeyo.
Wesley • November 12, 2013 at 2:04 pm • Reply
Awesome. daal dadka aan ahay [Masiixiyiintu waa safka hore, oo ay la socdaan kuwo kale oo badan la] tuuraya aayaddani waxa sida ay u dhan trumps. Waxaa loo isticmaalaa sida karaa ka soo baxay oo ________ kaarka lacag la'aan ah. Ma aha ee waxa qoraaga yidhi. Thanks for Dejinta.
hay • November 12, 2013 at 2:13 pm • Reply
halkan cilmiga Awesome. Waxaan had iyo jeer u duceeyey by posts aad. Waxaan Ilaah, waayo, waxaad la isticmaalayo habka uu ku mahad. Waxaad kaliya oo aan ugu baaqay in ay ka dhigi music, laakiin inuu minbarka.
Ilaah u iyo qoyskaaga ku barakeeyo!
Sharon C. James • November 12, 2013 at 2:14 pm • Reply
Waad ku mahadsan tahay wax badan u wadaaga fikirka this. Waxaan la wadaago doonaa post oo tukada badan oo ah in ka dhigay this ay banner, fahmin sida Masiixu wuxuu damacsanaa, iyo sidoo kale Galatiya 6:1. joog barakaysan.
Christoph • November 12, 2013 at 2:17 pm • Reply
Waxaan jeclahay in aan dib u soo qaadan Ciise ee John 7:24 – “xukumi xukunka xaqa ah.” Taasi disarms diidmo iyo keenaysaa fursad ah in uu sharaxo waxa uu ka dhigan tahay, sidii aad ku samaysay in aad post.
Gloglo • November 12, 2013 at 2:18 pm • Reply
Tani waa waxa aan la hadlayo ku saabsan la aabaheey oo wuxuu yidhi isku wax saxda ah. Ilaah ha idiin barakeeyo Waxaan rajeynayaa in qof walba ka akhrisan doona
MJ • November 12, 2013 at 2:19 pm • Reply
ereyga Good. Waxaan maqlay in aan waa wax ha ku garaynina, laakiin xaq ah u garsoor karaa. Sida aan dhihi karo wax ku saabsan saaxiib waa kan “shacking kor” laakiin in sidaas samaynaya, Waxaan aan ahay cibaadalaawayaal ah sababtoo ah waxaan ahay ma u samaynaya.
Mark King • November 12, 2013 at 2:26 pm • Reply
Thanks for faahfaahin ah oo ku saabsan Trip this. Kani waa mawduuc aad u muhiim ah waxa daasadda ah qarnigan. Sidaas xaq badan ka jira. Jacaylka adkaantii aad tilmaamay, aad.
Waxaan arkaa aragtida ah xukun kasta sida isagoo dhibaatada. Our dabeecadood tartan noo khayaanaan fekerayo in qof noo sheegaya aan waa khalad in uus qaar ka mid ah haddii jidkiisu waa isku day ah uuga. Haddii aan arrintan u aragno sida tilmaam jacayl ah, waxa ay qaadataa on firfircoon ahaanba ka duwan.
Mid ka mid ah wax ka badan in aan qabto… Waxaad phrased this hal qayb gaar ah si dadka nixin laga yaabaa. Waxaad igu tidhi, ” Ciise ma “macnaheedu” in la yidhaahdo xukunka oo dhan waa khalad. Oo haddii aan nahay daacad nafteena, ma aan samayn “macnaheedu” in mid ka mid.
Just for Hufnaan aawadiis, laga yaabaa in hab wanaagsan in weedhan waa in “Waa in aynaan u fasiro this sida Ciise ku yidhi” xukunka oo dhan waa khalad.
akhrin A degdeg ah iyada oo loo marayo, iyo qof ka socda this reading in fikirka tagaan, “Oh, Ciise macnaheedu ma in aan idhaahdo,?” Markii aan hubaa ahay Ciise loogu tala galay in la sheego waxa uu sheegay in. Waa ll Fasirka.
Waan ogahay waxa aad loogu tala galay. Just aad si ay u xajiyaan ugu sareeya haddii heerarka suugaanta. Waxaan ku kalsoonahay in aad fahamto sababta aan u sheegay in.
Majeero shaqadaada (oo dhan waa haddii, ma ahan oo keliya music ah)! Ka dhig ku shiidi walaalkiis!
siin • November 12, 2013 at 2:35 pm • Reply
run Deep la hadlay mid ka mid on this.
Ilaahay ha barakeeyo aad wasaarada.
Waxaan inta badan u malaynayaan in marka aan si buuxda u fahmi state of our Dambi, waxaan markaas u Dhawaanina deriskeena naxariistay iyo jacaylka.
anajcruz • November 12, 2013 at 2:42 pm • Reply
i jeclaa this!! runtii insightly, yididiilo, canaano aaaand!!!
Waanada cabsi badan waxa ay ka dhigan tahay in midkiinba midka kale jeclaado!! mahad walaalkiis! Ilaah ha barakeeyo!!
Xusuuso: Kaliya Ilaah i xukun karaa? (By Trip Lee of blog BuilttoBrag.com) | Ron "Big Black" Garrett
WayneChristian • November 12, 2013 at 3:59 pm • Reply
Kaliya Ciise ayaa sheegay in ay si fiican u! Safarka aad tahay neefta ah hawo cusub! Waad ku mahadsan tahay dadaalkaas! Well ku qoran sida had iyo jeer! Ilaah Speed ​​walaalkay!
JosiahCarter • November 12, 2013 at 7:31 pm • Reply
Haa! Waad ku mahadsan tahay wax badan, waana taas qoraal! Kani waxa uu ahaa on maskaxdayda aad u badan waayadan, gaar ahaan marka aan arko eraygiisii “garsoore”. Waxaan xaqiiqo ah inaan la wadaago this!
David • November 12, 2013 at 8:02 pm • Reply
Mahadsanid. Mid ka mid ah tilmaanta ugu saxsan ee aayadda iyo waxa ay tahay aan ku arkay. Christian kasta waa in ay isu baaro iyada oo indhaha ilaahyo marka uu ka hadlayo in kale.
carlosAviles • November 12, 2013 at 8:50 pm • Reply
Aad yididiilo. Oo haddana waxaan isku dayaan oo ay ku guuldareystaan. Aniga qudhaydu waxaan qabtaan waqti ka waqti iyo waan ogahay in aan fiirin gudahood ugu horeysay ka hor inta aan hadlo oo kaa caawin qof dib ugu heli on Jidka Quduuska ah.
Trip Thanks Lee.
modallas • November 13, 2013 at 1:53 waxaan ahay • Reply
Waxaan la dhibtoonayo Dis. Haddaba i helay faham wanaagsan!!!
modallas • November 13, 2013 at 1:54 waxaan ahay • Reply
Waxaan bin dhibtoonaya waxaa la. Ilaah ku mahadsan tahay i helay faham wanaagsan
TeriR • November 13, 2013 at 6:44 waxaan ahay • Reply
Waa sabab naga dambeeya waxa aan odhan ka dhigaya xukunka walaalaheena waxtar leh ama waxyeello. Anigu ma waxaan ahay fikirka, “Waa maxay oo aad samaynaysid waa khalad! Kitaabka Quduuska ah wuxuu leeyahay. Waxaad u baahan tahay inaan ku saxno…” Ama waa, “Taasi waa sababta qeybiso xanuun iyo waxaan ogahay waxa taas sida. Waxaan daryeel adiga kugu saabsan oo aadan rabin in aad u…”
Trip Like yiri, meelo kale oo aan u sheegay si cad in macallimiin been ah u garsoor.
Waa ay iska cadahay waxaan u baahan nahay waxgarashada Ruuxa Quduuska ah si ay u sameeyaan xukummo qumman, si aan waa in la isku xirta la isaga hor, inta lagu guda jiro, iyo ka dib!
Kale Trip dhibic wanaagsan laga sameeyey waa, iyagu ma ay na maqli doonaan xitaa haddii aan qalbigeennu waa meel sax ah, tahay, in aan ku nool rasmi ah Ilaah iyo walaalaha ka hor.
Junior • November 13, 2013 at 7:40 waxaan ahay • Reply
Hishiis la dhibtoonayay this muddo ah hadda. Laakiin reading this article ayaa i dareemi 10 jeer kaga fiican yihiin ka hor. Trip Thanks! Ilaahay ha barakeeyo walaalkiis.
EJD • November 13, 2013 at 8:10 waxaan ahay • Reply
article wanaagsan! “By ay miro, ayaad ku garan doontaan.” Waxaa cad Masiix Dhadkan noo noqon circumspect in dib u kuwa kale – ugu muhiimsan, marka waannu naadinnaa Injiil, qaybta hore waxaa sharxaya sida qofka laga soocay Ilaaha Quduuska ah oo ay sabab u tahay dembi (in xukun moral!) Markaas waannu naadinnaa rumaysadka xagga Ciise Masiix (Shuqulkiisa madax furashada ku Cross iyo xabaashii faaruqa) waa jawaabta nin ee kala ah Ilaaha, Aabbaha! fariin Injiil waa dhamaystirnayn haddii
aan tago meel LUMAY aadanaha (Sharciga ayaa noo xukuma!) Laakiin Masiix bixiyaa nimco ina dembilayaal. Sida John Newton qoray, “Waxaan mar ahaa LUMAY, laakiin hadda ahay HELAY!”
Tatenda • November 13, 2013 at 10:57 waxaan ahay • Reply
Aamiin Bro. Waxaan ku nool Zimbabwe iyo aayadda in uu yahay xataa ku caan ah halkan!!! Waxaan dadka injiilka ku wacdiyo, waxaana ogaaday jeer ka badan aan danaynayaa in la xasuusto in kuwa aan rumaysadka lahayn iyo Masiixiyiinta ah kuwaas oo aan xaq u nool yihiin isticmaali aayaddan sidii gaashaan oo ka gees ah la saxo. Waa wax laga xumaado, run ahaantii murugo…
Bruno • November 13, 2013 at 11:48 waxaan ahay • Reply
Darnell • November 13, 2013 at 3:18 pm • Reply
Waxaan si buuxda u raacsan tahay fasiraadda in xukunkaygu sida ay Matthew 7. Waxa kale oo aan rabay in aan ku daro in isagoo sheegay in aanu sida Masiixiyiintu ma aha in “garsoore” adduunka ama kuwa aan Masiixa ku, laakiin waxaan “garsoore” jidhka Masiixa ama kiniisadda. Ilaah ayaa sheegay inuu isaga qudhiisu “xaakinno” dunida iyo carruurta na ma uu. 1 Corinthians 5:12-13
Xusuuso: Qodobka ka Trip Lee on naftaada iyo dadka kale wax u xukumaya « 360dhalinyarada
Stephen • November 13, 2013 at 5:27 pm • Reply
Kate • November 13, 2013 at 7:06 pm • Reply
Hey ~ lay wacdiyaya Sunday this on xukumaya (ama ma lol) oo waxaan ka yaabban ahay haddii aan koobi karo / paste qaar ka mid ah fikirradiinna geli wacdintii? Thanks! Kate
Clayton • November 13, 2013 at 10:01 pm • Reply
Aad u qoto dheer, Ilaahay ha barakeeyo Bro
Xusuuso: Morning Mashup 11/14 | Theology Matters
Xusuuso: Weekly Balanqaadyo [11/15/13] | Harvard Avenue College Wasaaradda / Career
Xusuuso: Qasnadaha Daily | maal Masiix
adkaaday • November 18, 2013 at 1:38 pm • Reply
Waxaan mahad jacaylka Ilaah iyo erayadii barakaysan ee xigmadda xagga Ilaah aad guys… Jacayl badan
Xusuuso: MUXUU MASIIXIGA A eg? | Raadinta Soul ee Seoul
Tyler • November 26, 2013 at 1:07 pm • Reply
Thanks aad u badan for this dhajinta. Waxaan qabaa in fariin tani waa sidaas oo lagama maarmaan u ah dadka Masiixiyiinta ah ee dhammaan qaybaha nolosha inay maqlaan. Waxaan u baahanahay in la bilaabo jidka Ciise inoogu yeedhay mid kasta oo kale oo jecel yihiin inay taas oo macnaheedu yahay meelaha wax ka qabashada u baahan in wax laga qabto in naxariistay.
pelumi • November 26, 2013 at 5:56 pm • Reply
Xaqiiqdii tani i caawisay
sida had iyo jeer
barakayn aad safarka
Kathryn • November 27, 2013 at 8:51 pm • Reply
Fadlan ku baryayaaye inaan doonaa qalbi furan si dhab ah; aan u ogaado dadka doonaa oo waa la xoreeyey; inaan doonaa rumaysadka xagga Ciise iyo in toobaddii ee dembigayga. Si aan u heli doontaa nimcadiisa. Si aan aan kaa xumaan maayo by aan u baahnaa laakiin by dembi. Mahadsanid.
Elvis • December 4, 2013 at 11:09 waxaan ahay • Reply
waxaa ku jira si kasta si ay u wadaagaan eraygan….ay furitaanka indhaha reaaly waxa aad sheegtay oo kaliya in Trip blog kuwan…Continue wasaaradda (dhamaantood)..
Xusuuso: Trip Lee – Kaliya Ilaah i xukun karaa? » Christian Apologetics & Wasaaradda Sirdoonka
Xusuuso: Trip Lee - Kaliya Ilaah i xukun karaa? | Addoomada Grace ApologeticsServants of Grace Apologetics
Michael • January 29, 2014 at 12:47 pm • Reply
Haddii aad si dhab ah u maleynayaa in ku saabsan, “Ha i ma xukumi.”, waa dhab xukun.
Haddii uu qof isku dayayo inuu ku caawiyo, oo aad ku eedeeyaan inay ka aad ah wax u xukumaya……farsamo, aad iyaga u xukumaya. (Oo si khalad ah iyaga oo ku eedaynaya in at)
Daacadii, aad i xukumi kara haddii aad rabto, Waxaa laga yaabaa in aan u baahanahay saxo. (“Sax jacayl”) Just ha igu xukuntid oo aan la soo dhaafay ama ay wax laakiin hadalka.
Mercy • February 19, 2014 at 10:29 waxaan ahay • Reply
Wow. Tani waxa ay ahayd post weyn. Muddooyinkan danbe, Waxaan isku dayaynaa inaan xusuusiyo Matthew 7 laakiin nooca halmaamay waxa ay la micno. Oo annaguna waxaannu u baahan nahay in midba midka kale ka soo caawin laakiin ma noqon adag oo ku saabsan. Waxaan si buuxda u heshiiyaan. Waa ppl arkaya kinda murugo Xumeeyaan dhaleeceeyo ppl kale oo arkay dareenka dhaleeceeyay jebisay. The dhaleeceeyay cad yihiin ma kaamil ah laakiin waxa ay u muuqdaan in ay xitaa ma oga. Waa murugo leh. Dad badan waxay u baahan yihiin in ay ku noolaadaan by Matthew 7. Markaasaa aayadda ee la soo dhaafay ahayd weyn in. Dadka aan la socday inay doonayaan in ay ku socdaan waddo halkaas oo qof walba ku maqan yihiin ku candhuufay iyaga on.
Simon • March 12, 2014 at 1:07 pm • Reply
Wow, erayo dhiirigalin. Waxaan dheeraad ah ka posts aad akhriyi doonaa! ;)
April • March 23, 2014 at 11:14 waxaan ahay • Reply
Wow!!! QOF Bishaareeye ayaa DAMBEYNTII sidan ku hadlay,!!! Waxaan ahaa kaliya la hadasho qof ee aan xafiiska ku saabsan this laba maalmood ka hor!!!! blog Wonderful!!
Xusuuso: Ciise Masiix Empire | Pastor-Heesaaga Trip Lee Wadahadaladii u yeedhay Youth in Kac’ oo u adeegi jiray si Taageerayaasha on Heerka a Personal (Video)
Kyle • Laga yaabaa 8, 2015 at 9:10 waxaan ahay • Reply
sidaas halkan waa su'aal aad u. waayo, dhowrkii sano ee la soo dhaafay ayaa la i shaqeeya ma jugding qof wax. sida addict ah qof kasta oo quruxsan badan adduunka aad jugdes oo taasi ka dhigan tahay in bartey dadkaan hadda og wax walba oo adiga kugu saabsan. xitaa waxa aad fikirkooda ama waxa aad qeybiso sameeyo ama xataa sida aad ku dhaqaaqi doonto ama waxaa laga yaabaa in ay kuu sheegaan sida aad dareensan tahay wax. i runtii siinin hesho sida dadkan samayn karaa. ay aad u xun. Waxaan u imid si aad u ogaato waxaa jira dad badan oo soo baxay waxaa i neceb, oo ay marnaba xitaa ii kulmay. intiisa badani ma hab loo xakameeyo waxa booda madax ayaad noo soo galay. jugdment pre maskaxda waxaa loo isticmaali karaa in shaqsi ahaan isku diyaarin waxyaalaha aad u malaynayso occure laga yaabaa sababta oo ah waxa aad aragto oo ku saabsan qof. laakiin haddii aad kaliya fiiro fiican oo qaadan kartaa on wax yar oo muujinaya xaqiiqada ku saabsan qof in ay wali jugding? ka dibna intiisa su'aasha ku saabsan malo. fog jidka ugu xumeyd jugde qof by. i siinin aad u hesho. inkastoo aad qofkaan u sheegay in aad siinin iyaga ku kalsoon tahay si ay u fuliyaan qaar ka mid ah hawl sababta oo ah (caadi ahaan sabab la'aan) OTHER MARKAA hooba kaliya sida i dareento oo waa waxa aan OGTAHAY aad samayn doonaa. dabcan haddii qofka waxaa lagu yaqaan in ay ku guuldareysato, taariikhda iyo ku celin doonaa karaa, laakiin inaad u sheegto qof sida ay u dareemaan, qabaa, ama sida waxaa ka socda u dhaqmaan waa bullshit. ay jugdment asal indha la '. iyo labada qof in hadda dareemi doontaa encompetant iyo caadadiisu xitaa isku dayin, ama qof i jeceshahay, guentee doonaa si ay u caddeeyaan qofka in si qalad ah in ay mar dambe ku odhan doonaa, in. laakiin inkastoo aad mar kale naftaada caddayn waqti iyo waqti. isla fikradahaaga. fikirrada? i tegi karin on maalintii oo dhan.
Xusuuso: Trip Lee - Kaliya Ilaah i xukun karaa? - SOG- Addoomada Grace
Xusuuso: Kaliya Ilaah i xukun karaa… | Dhoola By Faith
Fiiri video ee Sweet Victory ka album ugu dambeeyay ee Trip, Kaca
Millennials iyo Dib u Heshiisiinta Racial
Tani waa hadal Trip ka Summit ERLC ku saabsan Injiilka iyo Dib u Heshiisiinta Racial. Hoos waxaa ku qoran qoraal gacmeedka ka fariinta in. Tani fiidkii, Waxaan ka codsaday in ay hadlaan oo ku saabsan millennials iyo dib u heshiisiinta jinsiyadeed. Oo waxaan ka dareemayaa mudnaan inay halkan u taaganahay oo aad u adeegtaan oo qayb ka ah dadaalka this la yaab leh dhinaca midnimada kiniisadda Ilaah ee. Sida
Maxaa Mowduucyada Kitaabka Ma Kala hadal?
In buugga cusub ee Trip, Kaca, wuxuu isku dayay in uu ka qoro wax la xiriira qarnigan. Daawo sida uu marayo qaar ka mid ah cutubyada ku socdaa oo siinayaa ugu sarreysa dhuumasho ah content.
"Trip ee ku qoran buug aan u malaynayaa in qof kasta oo dhalinyaro u baahan yahay in uu akhriyo. Uu rabitaankiisa Ciise iyo qarnigan yimaado iyada oo cod weyn oo cad bogga kasta. Ma sugi karo si ay u arkaan saameynta fariin this ayaa qarni in gaajaysan ujeeddo "-. Lecrae, Grammy abaal marinta- guusha @lecrae artist "Kac waa a
Piper ee Hordhac Kac
buugga cusub ee Trip, Kaca, waa hadda! Read Hordhac John Piper ee buugga hoos ku qoran. Waxaad ka hor-si kara kitaabka iyo ogaato wax badan oo at Risebook.tv Mid ka mid ah waxyaalaha ugu muhiimsan ee aan jeclahay oo ku saabsan Trip Lee iyo buug uu qoray, Kaca, waa xidhiidhka ka mid ah maamuustaan, iyo ku tacaluqa. Ujeedada ugu habboonaanshaha in dhaqanka American waa caadi.